Fired: MyBlogLog နှင့် BlogCatalog Widgets | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 27, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အချိန်ကြာမြင့်စွာဖတ်ရှုခဲ့ဖူးသူများအတွက်ကျွန်ုပ်သည် MyBlogLog နှင့် BlogCatalog sidebar widgets များကိုငါဖယ်ရှားလိုက်သည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ငါအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာသူတို့ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အတူရုန်းကန်။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုမကြာခဏလာရောက်လည်ပတ်သောရှေးရှေးများ၏မျက်နှာများကိုတွေ့ရခြင်းကိုကျွန်တော်နှစ်သက်ခဲ့သည် - စာဖတ်သူများသည်ကိန်းဂဏန်းများမဟုတ်ဘဲတကယ့်လူများဟုထင်မြင်စေသည် Google Analytics.
ငါအရင်းအမြစ်တစ်ခုချင်းစီကိုအပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးသူတို့ဆိုက်ကိုအသွားအလာမည်သို့မောင်းနှင်သည်၊ ဆိုက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ visitors ည့်သည်များအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပုံကိုအပြည့်အဝလေ့လာခဲ့သည်။ Widgets နှစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မကြိုက်တာက \_ t
MyBlogLog ပုံအလွတ်များ။ သင်တစ် ဦး ထုတ်ဝေသွားလျှင် ဝစ်ဂျက် ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေပြတယ် သာ ဓါတ်ပုံများကိုပြသည်။
BlogCatalog ရုပ်ပုံများသည်လူတို့၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာများအတွက်အမှန်တကယ်ကြော်ငြာဖြစ်သည်။ ဒါကအခမဲ့ကြော်ငြာပါ၊ ဒါကငါလက်မှတ်ထိုးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။
လွန်ခဲ့သော ၄ လကကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်ဘေးဘက်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခဲ့သည် Technorati, FuelMyBlogနှင့် BlogRush။ Technorati သည်သူတို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဘလော့ဂ်များပေါ်တွင်ပြန်လည်အာရုံစိုက်ရန်ကြိုးစားနေပုံရသည် - ငါသူတို့ပြန်လာမည်ဟုမျှော်လင့်သည်။ BlogRush ဟာတကယ့်ကိုတားဆီးထားတာမှန်သမျှမလုပ်ပါဘူး။
FuelMyBlog နှင့် BlogCatalog သည်အသစ်အဆန်းအတွက်ကောင်းမွန်သောကိရိယာများဖြစ်နေဆဲပင် ဘလော့ဂါများ စာဖတ်သူအသစ်များရှာဖွေရန်။ MyBlogLog Yahoo! တွင်တိမ်တိုက်များပျံ့နှံ့သွားပြီ နှင့်ဆီလျှော်ဖြစ်လာကြပုံရသည်။
စာဖတ်သူတစ်ထောင်ထောင်နှင့်ချီ။ (ဝက်ဘ်နှင့် RSS ကို), MyBlogLog ကျနော့်ဘလော့ဂ်ကို visitors ည့်သည် ၁၆ ယောက်သာရောက်သည်။
BlogCatalog; သို့သော်ထိုအချိန်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်အား 58 ည့်သည် ၅၈ ယောက်လာခေါ်သည်။
အချို့အတွက်မူယင်းသည်ရလဒ်ကောင်းများဟုထင်ရပေမည်။ ပြproblemနာကငါ့ဘလော့ဂ်မှာအဓိကအိမ်ခြံမြေဖြစ်သည်။ ညာဘက် sidebar သည်ကျွန်ုပ်၏ပုံမှန်စာဖတ်သူများစွာသည်မှတ်ချက်များ၊ အမျိုးအစားများ၊ ဗွီဒီယိုများစသည်တို့နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ စာဖတ်သူတစ် ဦး တည်းသည် ပင်မစာမျက်နှာ…မ ၁ ။
ကျွန်ုပ်၏ visitors ည့်သည်များသည်ဝစ်ဂျက်များမှအဘယ်အကျိုးကျေးဇူးရရှိခဲ့သနည်း။ ဘယ်သူမှသူတို့နဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်တဲ့အတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမရခဲ့ပါဘူး။
ဝစ်ဂျက်များမှကျွန်ုပ်ဘာအကျိုးရခဲ့သလဲ။ ထိုအကျိုးကျေးဇူးများသည်စာဖတ်သူများအနေဖြင့်ထိုလင့်ခ်များအတွက်ထိုနေရာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူများရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ထင်ရှားသည်လား ကိုပြု နှင့်အပြန်အလှန်?
ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချသည်မှာကျွန်ုပ်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးမှာဘေးဘားအိမ်ခြံမြေအမြောက်အများကိုလွှင့်ပစ်ရန်မလုံလောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးသည်သင်၏အသွားအလာများမှသင်ရရှိခဲ့သည့်အရာများထက်သင်ပိုမိုအကျိုးရှိမည်ဟုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ယုံကြည်ပါသည်။
ရလဒ်အနေဖြင့် ... သူတို့ပစ်ခတ်ကြသည်!
Tags: ချစ်သူငါးဖမ်းကလစ်အီးမေးလ်ကိုအတည်ပြုခြင်း၊ရက်စက်ဒီဂျစ်တယ်ကိရိယာအစုံlink တည်ဆောက်ခြင်းmisoမိုဘိုင်း add-to- လှည်းနှုန်းထားများရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimization infographicအချက်အလက်ရှာဖွေခြင်းspam ကိုရှာပါပင်လယ်ကမ်းခြေslider ကိုsnappytvလူမှုရေး bookmarkingဆိုရှယ်မီဒီယာအကြံပေးချက်များလူမှုရေးXbox Liveမင်းရောပဲ
အကြှနျုပျ၏ Next ကိုဖတ်ပါ: မြေထုဆွဲအားစျေးကွက်
မတ်လ 27, 2008 မှာ 7: 39 pm တွင်
သင့် Blog ကို BlogCatalog သို့မဟုတ် MyBlogLog မှကြည့်ရှုနေဆဲလား။ MyBlogLog ကိုကြိုက်နှစ်သက်သောလူများအတွက်ကြည့်ရှုခြင်းသာမက၎င်းဘလော့တွင်အိမ်ခြံမြေတင်သွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ MyBlogLog ကိုနောက်ဒီဇိုင်းပုံစံ၌အောက်ခြေသို့ရွေ့လျားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
ထိုနှစ်ခုသည်အသုံးပြုသူများကို ၀ င်ရောက်စေခြင်းအတွက်အလုပ်မလုပ်ပါကဘာလဲ။ သိသာထင်ရှားစွာသင်သည်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည်၊ Doug၊ သင်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းလမ်းကြောင်းသည်သင့်ကိုထိခိုက်မှုဖြစ်စေသောအခြားအရာများလား။
မတ်လ 27, 2008 မှာ 7: 47 pm တွင်
ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ visit ည့်သည်တစ် ဦး ချင်းစီကို ၀ င်ငွေအများကြီးရတယ်။ ငါဘလော့ဂ်အသစ်တွေကိုတစ်ချိန်လုံးရှာဖွေသည်၊ သူတို့၏ဘလော့ဂ်များကိုမှတ်ချက်ပေးသည်၊ ရှေးရှေးများကိုလူကြီးမင်းအားပြန်လည်ဖြေကြားသည် (:)) ။ ငါဆက်သွယ်မိသောအခါငါတတ်နိုင်သမျှများစွာသောအီးမေးလ်များကိုဖြေပါ။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည် blogging တွင်ကျွန်ုပ်လုပ်သောဒေသဆိုင်ရာအတန်းများနှင့်ကျွန်ုပ်အကူအညီကိုပြောသောအဖြစ်အပျက်များသည်ထင်သည်။ ငါ့မှာသူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရှိတယ်။
ငါသည်လည်း 'ခေတ်ရေစီးကြောင်း' မဖြစ်နိူင်သောအာရုံစူးစိုက်မှုမရရှိနိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်လိုသည်။ သူတို့ကဒေသဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့အခါငါအထူးသဖြင့်လုပ်ပါ။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်နောက်ဖေးအတွက်ရှေးရှေးကူညီလို!
PS: ဘလော့ဂ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် search engine အသွားအလာအတွက်အနီရောင်ကော်ဇောတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ကောင်းမွန်သောပါဝင်မှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိတွေ့မှုတို့ကစာဖတ်သူများကိုဆက်လက်ထားရှိသည်။
မတ်လ 28, 2008 မှာ 9: 50 AM
ငါပါ ၀ င်သောလူမှုရေးကွန်ရက်များအတွက် Clark's Picks ၏ဘေးဘား၏အောက်ခြေတွင်နဖူးစည်းစာတန်းများကိုထားလိုက်သည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆလို့ရရင်ငါမကြာခဏသွားလေ့ရှိတဲ့ Fuelmyblog အများစုကနေအသွားအလာရတယ်။
အခုငါ Entrecard နှင့် Spott ကိုစမ်းသပ်နေပါတယ်။ ထိုဆိုဒ်များတွင်သင်အကြံဥာဏ်များရှိပါသလား။
မတ်လ 28, 2008 မှာ 9: 01 AM
တစ်ဦးအဖြစ် လူမှုရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မည်သည့်ဝစ်ဂျက်များအသုံးပြုသင့်သည်ကိုအစဉ်အမြဲဆွေးနွေးနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာအကြံပြုရမည်ကိုကျွန်ုပ်လုံးဝမသိခဲ့ပါ။
ကျနော့်ရဲ့ရဲ့သံသယကသူတို့ရဲ့ "bling" နဲ့တကယ့်အသွားအလာကိုမမောင်း။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်သူကိုစစ်ဆေးဖို့အမြဲတမ်းရည်ရွယ်ခဲ့တယ်။
ဆက်ဖတ်မယ်၊ ငါဆက်ဖတ်မယ် !!
မတ်လ 28, 2008 မှာ 12: 21 pm တွင်
သင်၏ site သို့အသွားအလာကိုမောင်းနှင်နေသည့်အရာနှင့်မဟုတ်သောအရာများကိုကြည့်ရှုရန်သင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းကအလွန်ကောင်းသည်။
မတ်လ 31, 2008 မှာ 9: 22 AM
BlogCatalog သည်သင်တို့ကိုတန်ဖိုးရှိသောအသွားအလာအချို့ယူဆောင်လာသည်ကိုတွေ့ရ။ ၀ မ်းသာသည်။ ၎င်းသည် Stumble သို့မဟုတ် Digg နံပါတ်များမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အသင်း ၀ င်များသည်အခြားကွန်ယက်အများစုထက် ပိုမို၍ ကပ်လျှက်တည်ရှိသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
BlogCatalog ဝစ်ဂျက်ကိုသင်ချန်ထားတာကိုတွေ့ရတော့စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့သင့်မှာအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အကြောင်းကောင်းတွေရှိတယ်။ ငါတို့ရဲ့အခြားဝစ်ဂျက်များကိုမကြာသေးမီကကြည့်ဖူးလား။ သင့် Blogcatalog နှင့် / သို့မဟုတ်လူမှုကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှု၏ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြသောကျွန်ုပ်တို့တွင်အနည်းငယ်ရှိသည်။ ဤသည်မှာစာဖတ်သူများကို ပို၍ အကြောင်းအရာများဖြစ်သောကြောင့်ကျပန်းမျက်နှာများထက်ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်၏လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောကျွန်ုပ်တို့၏ News Feed ဝစ်ဂျက်ကိုယူပါ။ http://www.blogcatalog.com/account.widget.php?type=feed
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝစ်ဂျက်အားလုံးသည် BC အဖွဲ့ဝင်များသည်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်နေသည့်အရာကိုဓာတ်ပုံ / ကြော်ငြာများကိုဝစ်ဂျက်တွင်ပြစရာမလိုပဲလည်းခြေရာခံသည်။
မေလ 30, 2008 မှာ 1: 01 pm တွင်
မကောင်းသောအားဖြင့် BlogCatalog သည် nofollow ကိုသုံးသောကြောင့်မည်သည့် PR ကိုမှမဖြတ်ပါ။
မတ်လ 13, 2009 မှာ 3: 05 AM
ဟိုင်းဒေါက်ဂလပ်၊ တွစ်တာမှာသင့်ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်၊ ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။ Twitter သည်သင့်အတွက်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသိရှိရန်စိတ်ဝင်စားပါ။ ငါ ya ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယခု sidebars တက် spruce သဘောတူ! Technorati အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက လူတော်တော်များများက Technorati ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကိုစွန့်ခွာကြတာတွေ့ရတယ်၊
ဧပြီ 6, 2009 မှာ 6: 37 AM
ကျွန်ုပ်၏ Mybloglog, blogcatalog, fuel myblog သည်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မှာကျွန်ုပ်မည်သူလည်ပတ်နေသည်ကိုကြည့်ချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ကိုလည်းပြန်စစ်လို့ရတယ်။ ပြန်ပေးရမယ့်အမှတ်အသားအဖြစ်နဲ့၊ ငါ့ site ကိုသူတို့ဘာတွေရည်ညွှန်းတာလဲဆိုတာကိုလည်းသိနိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။